SIDA LOO HABEEYO SIRTA DARAWALKA BITLOCKER EE WINDOWS 10 - JILICSAN
Sida loo habeeyo sirta darawalka BitLocker ee Windows 10
BitLocker Drive Encryption waa sifada sirta diskka buuxa oo sir doona darawalka oo dhan. Marka kombuyuutarku kor u kaco, bootloader-ka Windows wuxuu ka soo raray qaybta kaydka ah ee System Reserve, bootloader-ku wuxuu kuu sheegi doonaa habka furitaankaada. Microsoft waxa ay ku dartay sifadan daabacado la xushay ee daaqadaha (On windows pro and std editions) Laga bilaabo Windows Vista Sidoo kale waxa lagu daray Windows 10 kombiyuutarada. Sifadan waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo xogta iyada oo la siinayo sirta mugga oo dhan. Sirintu waa hab lagu sameeyo macluumaadka la akhriyi karo oo aan la aqoonsan isticmaalayaasha aan la oggolayn. Windows 10 waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee teknoolojiyadda sirta ah, Nidaamka Faylka Incrypting (EFS) iyo BitLocker Drive Encryption. Markaad sirayso macluumaadkaaga, waa la isticmaali karaa xitaa markaad la wadaagto isticmaalayaasha kale. Tusaale ahaan: Haddii aad u dirto dukumeenti Word ah oo sir ah saaxiib, waxay u baahan doonaan marka hore inay furto.
Fiiro gaar ah: BitLocker lagama heli karo Windows Home iyo daabacadaha stater. Tilmaamkan Waxa Ku Jira Oo Kaliya Xirfadlayaasha, Ugu Dambeeya, Iyo Daabacaadyada Ganacsiga ee Microsoft Windows.
Hadda, waxaa jira laba nooc oo ah sirta BitLocker oo aad isticmaali karto
BitLocker Drive Encryption Kani waa sifada sirta diskka-buuxa oo sir doona darawalka oo dhan. Marka kombuyuutarku kor u kaco, bootloader-ka Windows wuxuu ka soo raray qaybta kaydka ah ee System Reserve, bootloader-ku wuxuu kuu sheegi doonaa habka furitaankaada.
BitLocker si aad u tagto: Waddooyinka dibadda, sida flash-ka USB-ga iyo kuwa adag ee dibadda, waxaa lagu qarin karaa BitLocker To Go. Waxaa lagu weydiin doonaa habka furitaankaada markaad ku xirto darawalka kombiyuutarkaaga. Haddii qof aanu haysan habka furitaanka, ma geli karaan faylasha ku jira darawalka.
Kahor Hubi si aad u hagaajiso astaanta BitLocker
BitLocker Drive Encryption waxaa laga heli karaa kaliya Windows 10 Pro iyo Windows 10 Enterprise.
Kombuyuutarkaaga BIOS waa inuu taageeraa TPM ama aaladaha USB inta lagu jiro bilowga. Haddii tani aysan ahayn kiis, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso soo saaraha kombuutarka taageera website-ka si aad u hesho casriyeynta firmware-ka ugu dambeeyay ee BIOS ka hor intaadan isku dayin inaad dejiso BitLocker.
Habka lagu sifeeyo dhammaan darawallada adag ma aha mid adag, laakiin waa waqti-qaadasho. Iyada oo ku xidhan tirada xogta iyo xajmiga wadista, waxay qaadan kartaa wakhti aad u dheer.
Hubi in kombuyutarkaagu ku xidhan yahay koronto aan kala go' lahayn inta lagu jiro hawsha oo dhan.
Ku habee sirta wadista BitLocker Windows 10
Si aad awood ugu yeelatid Oo aad u habayso astaanta sireed ee wadista BitLocker on Windows 10. Marka hore guji Start menu search and type control panel. Halkan guddiga kantaroolka guji System And Security. Halkan waxaad ku arki doontaa ikhtiyaarka BitLocker Drive Encryption Ku dhufo Tani waxay furi doontaa BitLocker Drive Encryption Window.
Halkan Guji Daar BitLocker Bellow oo ku socda Nidaamka Wadista. Haddii PC-ga aad awood u siinayso BitLocker uusan lahayn Module Platform ah oo la Aaminsanyahay (TPM), waxaad arki doontaa fariin leh
Qalabkani ma isticmaali karo Module Platform ah oo la aamini karo. maamulahaagu waa inuu dejiyaa Oggolow BitLocker la'aanteed TPM ku habboon ikhtiyaarka ku jira xaqiijinta dheeriga ah ee loo baahan yahay ee siyaasada bilowga ee Volume OS.
BitLocker Drive Encryption waxay caadiyan u baahan tahay kombuyuutar leh TPM ( Trusted Platform Module ) si loo sugo nidaamka hawlgalka. Kani waa microchip lagu dhex dhisay kombayutarka, kuna rakiban Motherboard-ka. BitLocker waxa ay ku kaydin kartaa furayaasha sirta ah halkan, kuwaas oo ka ammaan badan in ay si fudud ugu kaydiyaan xogta kombiyuutarka. TPM waxay bixin doontaa furayaasha sirta ka dib marka la xaqiijiyo xaalada kombiyuutarka. Weeraryahanku kaliya ma jeexi karo Hard Disk-ga kombiyuutarkaaga ama ma samayn karo sawirka saxan qarsoon oo kama saari karo kumbiyuutar kale.
Habee BitLocker oo aan lahayn chip TPM
Waxaad ku beddeshaa goob gudaha ah Windows 10 tifaftiraha siyaasadda kooxda si aad u isticmaasho sirta diskka ee BitLocker oo wata ereyada sirta ah. Oo Ka gudub Khaladka Qalabkani ma isticmaali karo Module Platform ah oo la aamini karo.
In la Sameeyo Noocaan gpedit gudaha Windows 10 Raadinta Taskbar oo dooro siyaasadda kooxda wax ka beddel.
Gudaha Windows 10, tifaftiraha siyaasada kooxda ayaa furmay, U gudub raacitaanka
Habaynta Kombiyuutarka> Qaababka Maamulka> Qaybaha Daaqadaha> BitLocker Drive Encryption> Nidaamyada Hawlgelinta Wadayaasha.
Halkan laba jeer guji Waxaad u baahan tahay xaqiijin dheeraad ah bilowga daaqadda ugu weyn.
U fiirso si aad u doorato ikhtiyaarka saxda ah maadaama uu jiro gelitaan kale oo la mid ah (Windows Server).
Ka dooro Midigta sare ee bidix oo dami Allow BitLocker la'aanteed TPM la'aanteed (waxay u baahan tahay furaha sirta ah ama furaha furaha USB flash drive) xagga hoose.
Intaa ka dib guji ayaa khuseysa oo ok si aad u sameyso isbedelada kaydinta. Cusbooneysii siyaasadda Kooxda si aad isla markiiba u dhaqangeliso isbeddellada. Si aad tan u sameyso taabo Win + R oo ku fur nooca gpupdate / xoog oo ku dhufo furaha geli
Sii wad ka dib ka gudubka Cillad TPM
Hadda-Mar kale u kaalay Daaqadda Encryption Drive BitLocker oo dhagsii BitLocker Drive Encryption. Markan ma aadan la kulmin wax qalad ah oo saaxir dejinta ayaa bilaaban doona. Halkan marka laguu sheego inaad dooratid Sida loo furo darawalkaaga bilowga, dooro Geli ikhtiyaarka sirta ah ama waxaad isticmaali kartaa USB-ga si aad u furto darawalka bilawga.
Halkan Haddii aad doorato Geli erayga sirta ah Mar kasta oo aad bilowdo nidaamka waxaad u baahan tahay inaad geliso erayga sirta ah. Oo haddii aad doorato geliso USB drive mar kasta oo aad u baahan tahay inaad geliso USB drive si aad u furto nidaamka.
U samee furaha sirta ah ee Bitlocker
Guji ikhtiyaarka geli erayga sirta ah oo samee Password. (Dooro furaha sirta ah ee sugan oo ka kooban xarfo waaweyn iyo kuwo yaryar, nambaro, iyo xarfo gaar ah. Iska hubi inaadan isticmaalin erayga sirta ah ee la midka ah ee aad u isticmaashid xisaabaadka kale ) Oo ku qor isla eraygaaga sirta ah dib u geli eraygaaga sirta ah tab guji xiga.
Hadda shaashadda xigta Dooro sida aad rabto inaad u kaydiso furahaaga soo kabashada, waxaad isticmaali kartaa xisaabtaada Microsoft haddii aad mid leedahay, ku kaydi suulka USB, ku keydi meel aan ahayn darawalka maxaliga ah ama daabac nuqul.
Waxaa aad loogu talinayaa in lagu kaydiyo USB flash drive iyo in la daabaco.
Marka aad diyaar tahay dhagsii Next. Daaqadda Xiga Waxaad haysataa laba doorasho marka aad sirayso diskkaaga deegaanka haddii uu yahay kombuyuutar cusub oo hadda laga soo saaray sanduuqa, isticmaal Encrypt-ka la isticmaalay oo kaliya. Haddii hore loo isticmaalay, dooro ikhtiyaarka labaad Siri dhammaan darawalka.
Maadaama aan horeyba u isticmaalayey kumbuyuutarkan, waxaan raaci doonaa ikhtiyaarka labaad. Xusuusnow, waxay qaadan doontaa waqti gaar ah haddii ay tahay darawal weyn. Hubi in kombuyuutarku ku jiro awoodda UPS haddii ay dhacdo koronto. Guji xiga si aad u sii wadato Shaashadda xigta ka dooro labada doorasho ee sirta ah:
Qaab cusub oo qarsoodi ah (ugu fiican darawalada go'an ee qalabkan)
Habka ku habboon (ugu fiican darawallada laga dhaqaajin karo qalabkan)
Hubi inaad hubiso Run BitLocker nidaamka hubinta ikhtiyaarka si aad uga fogaato luminta xogta, oo guji Continue.
Habka sirta ah ee Drive-ka Bitlocker
Markaad gujiso sii wad isla markiiba Bitlocker si aad dib ugu bilowdo Windows 10 si aad u dhameysato dejinta oo aad bilowdo sirta.
Ka saar haddii saxannada CD/DVD ay ku jiraan kumbuyuutarka, Keydso haddii la furo daaqadaha shaqaynayo oo guji Restart windows.
Hadda Bootka Xiga ee Bilawga BitLocker wuxuu ku waydiin doonaa erayga sirta ah kaas oo aad dejisay inta lagu jiro isku xidhka BitLocker. Geli erayga sirta ah oo ku dhufo furaha geli
Kadib markaad gasho Windows 10, waxaad ogaan doontaa inaysan wax badan dhicin. Si aad u ogaato heerka encryption.laba-gujista calaamada BitLocker ee ku taal barkaaga shaqada.
Waxaad arki doontaa heerka uu hadda marayo kaas oo ah C: BitLocker Encrypting 3.1 % la dhameeyay. Tani waxay qaadan doontaa wakhti, si aad u sii wadato isticmaalka kombuyuutarkaaga inta qarsoodigu ka dhacayo gadaasha, waxaa lagugu soo sheegi doonaa marka uu dhammeeyo.
Marka BitLocker Encryption dhamaato, waxaad u isticmaali kartaa kombiyuutarkaaga sida caadiga ah. Wax kasta oo la abuuray marka lagu daro isgaadhsiintaada waa la ilaalin doonaa
Haddii wakhti kasta aad rabto inaad hakiso sirta, waxaad ka samayn kartaa shayga Xakamaynta Sireeynta BitLocker. ama waxaad si fudud u riixi kartaa Drive-ka sir ah oo dooro Maamul BitLocker.
Markaad gujiso tani waxay furi doontaa daaqada BitLocker Drive Encryption halkaas oo aad ka heli karto xulashooyinka hoose.
Kaydi furaha soo kabashada: Haddii aad lumiso furahaaga soo kabashada, oo aad wali ku jirto akoonkaaga, waxaad isticmaali kartaa doorashadan si aad u abuurto kayd cusub oo furaha
Badalida Lambarka sirta ah: Waxaad isticmaali kartaa doorashadan si aad u abuurto furaha sirta cusub, laakiin waxaad weli u baahan doontaa inaad keento erayga sirta ah ee hadda jira si aad isbeddel u samayso.
Ka saar erayga sirta ah: Ma isticmaali kartid BitLocker la'aanteed nooc xaqiijin ah. Waxaad ka saari kartaa erayga sirta ah kaliya marka aad habayso hab cusub oo xaqiijin ah.
Dami BitLocker : Xaaladda, uma baahnid inaad sir ku sameysid kumbuyuutarkaaga, BitLocker waxay ku siinaysaa hab aad ku furto dhammaan faylashaada.
Si kastaba ha ahaatee, hubi inaad fahanto in ka dib daminta BitLocker xogtaada xasaasiga ah aan la ilaalin doonin. Intaa waxaa dheer, decryption waxay qaadan kartaa waqti dheer si ay u dhamaystirto hawsheeda iyadoo ku xiran xajmiga darawalka, laakiin waxaad weli isticmaali kartaa kombiyuutarkaaga.
Taasi waa dhan, waxaan rajeyneynaa inaad si fudud u habeyn karto astaanta sirta darawalka ee Bitlocker ee windows 10. Sidoo kale, akhri:
La xaliyay: Qalabka Bluetooth-ka oo aan ku xidhnayn windows 10, 8.1 iyo 7
Sida loo joojiyo adeegga Superfetch Windows 10, 8.1 iyo 7
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato PPTP VPN
La xaliyay: Maareynta Xusuusta BSOD (ntoskrnl.exe) Cilad ku jirta Windows 10